Trump Oo Ogaaladay In Uu Xilka Wareejo – Heemaal News Network
Madaxweyne Trump ayaa oggolaaday in uu bilaabo marxaladdii xilwareejinta ee Joe Biden kula wareegi lahaa xafiiska.
Madaxweynaha ayaa sheegay in hay’adda federaalka ee dusha kala socota wareejintu ay tahay in ay “sameyso waxa loo baahan yahay in la sameeyo”, inkasta oo uu wacad ku maray in uu sii wadi doono loollankiisa dhanka sharciga ah ee doorashada.
Madaxweyne Trump wuxuu cadaadis xooggan uu uga imaneyey xubnaha sarsare ee xisbiga jamhuuriga oo ay ku jiraan shaqsiyaada ay Trump aad isugu dhow yihiin.
Iyaga oo u soo jeedinayey talooyin ku saabsan inuu aqbalo in laga guuleystay isla-markaana uu iisu diyaariyo xil wareejin.
Mathew Littman, oo ahaa ninka khudabadaha u qora Joe Biden oo BBC u warramay wuxuu sheegay inuu aaminsan yahay madaxweyne Trump xil wareejin inuu iisu diyaariyo in lagu qasbay:
“Donald Trump dan kama laha cidda maamusha aqalka senetka. Donald dan kama laha xisbiga Jamhuuriga. Donald Trump wuxuu daneeyaa oo keli ah naftiisa, haddii uu aamino inuu sidaa uu wax ku sii wadi karana wuu sii wadayaa oo kama labalabeynayo. Balse malahayga ayaa ah maamulka adeegyada guud iney u sheegeen iney arrimuhu sidan ku sii socon karin ayna ku dhawaaqayaaan Joe Biden inuu guuleystay.”
Dibu Dhac ku Yimid War-Murtiyeed Laga soo Saarayay Shirka Dhuusamareeb.
Beesha Caalamka Oo Dowlada Somaliya kala Shirtay Dagaalka Al-Shabaab.